About Us - Shandong Jute Steel Pipe Co., Ltd.
Kugadzira Uye Kushambadzira Iyo Yakanakisa Hunhu Simbi Pipe Zvigadzirwa Kune Nyanzvi
Shandong Jute Steel Pipe Co.,Ltd.inyanzvi yeChina bhizinesi inobatanidzwa mukugadzira nekushambadzira yakanakisa mhando yesimbi pombi zvigadzirwa zvemhando dzakasiyana uye dzakasiyana-siyana dzevatengi kumba nekune dzimwe nyika.Inowanikwa muLiaocheng manispa, Shandong mudunhu, China, anenge 500km kumadokero kusvika Qingdao international seaport uye airport.
Nekumira kwechikwereti chepamusoro, zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye hurongwa hwesevhisi, uye mutemo wemitengo yemakwikwi, Uye inovavarira kumberi kugadzira kukosha kwevatengi uye kugutsa zvido zvevatengi zvakasiyana.isu tinotarisira nemoyo wese kumisikidza yakagadzikana yenguva refu yehurongwa hwekudyidzana bhizinesi newe.
Kuburikidza nekuomesesa kwemhando uye maitiro ekuongorora bhizinesi, takapfuura ISO9001, ISO14000, OHSAS18001 zviyero, kunyatso kudzora kutenga, kugadzira, kutengesa, imba yekuchengetera uye yekufambisa maitiro.international quality system mvumo muna 2002.
Nemhando yakanaka uye isingachinji, zvigadzirwa zvedu zviri kutengeswa kuAmerica.Europe.South America, India, Middle East nyika, Africa, Japan, Southeast Asia, Korea uye etc., uyewo zvakanaka kushandira musika wedu womunharaunda.
Kutarisira kwakanaka, timu yakabatana, yakanaka sevhisi hurongwa uye ruzivo rwakapfuma runopa kambani iyi hwaro hwakasimba hwekuenderera mberi. Zvigadzirwa zvitsva zviri kuramba zvichiongororwa uye kugadzirwa kuti zvizadzise kudiwa kwemisika yakasiyana. vari kusuma uye vachatanga kugadzirwa muna 2019)